Madfac maanta lagu riday ciidamada Itoobiya oo marayay agagaarka Tarbuunka oo ku dhacay gaari rakaab ah, gantaallo lala beegsaday xalay goobo ay degan yihiin saraakiisha iyo ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ah ee magaalada Muqdisho iyo warar sheegaya in dowladda damacsan tahay in weerar ay ka qeyb qaadanayaan 10 kun oo ciidan oo hubka looga dhigayo koonfunta Muqdisho. Ruunkinet 08/02/07
Madfac lala beegsaday gaawaari ay saaran yihiin ciidamada Itoobiya oo marayay agagaarka Tarbuunka ayaa si kama ah ugu habsaday gaari rakaab ah oo goobtaasi marayay. Madfacan ayaa la sheegay in uu u geystay wax yeello dadkii saarnaa gaarigaasi.
Sidoo kale, waxaa xalay weerar gantaallo ah lagu qaaday goobo la sheegay in ay degan yihiin ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda.
Goobahan oo ay ka mid ahaayeen Hotel Lafaweyne, Hotel Kaah, Villa Soomaaliya, dekedda weyn ee Xamar iyo meelo kale ayaan weli la sheegin sida ay wax u gaareen ciidamada dowladda iyo Itoobiyaanka.
Warka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda ay ku garaaceen madaafiic Al Barka oo aan ka fogeyn suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Madaafiicda ay soo rideen kuwa Itoobiya iyo kuwa dowladda ayaa la sheegay in ay ku dhinteen ilaa iyo 5 ruux oo qaarkood ay ku geeriyoodeen Isbitaalka.
Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay ayaa ku waramaya in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'isul wasaaraha ay damacsan yihiin in dhawaan weerar culus oo ay ka qeyb galayaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda lagu qaado koonfurta magaalada Muqdisho.
Ciidamadan oo lagu uruurinaya xerada Ballidoogle ayaa la sheegay in ay u badan yihiin taageerayaasha madaxweynaha, ra'isul wasaaraha, Shaati Guduud, iyo ninka dhawaan ay u magacaabeen guddoomiyaha gobolka Hiiraan.
Weerarkan ayaa la sheegay in ciidamada ka qeyb qaadanaya ay ka badan yihiin 10 kun oo askari loo qorsheeyay in ay kubka ka dhigaan beelaha Habargedir iyo Murasade ee ku sugan koonfurta magaalada Xamar.